Shiinaha PCB -saareyaasha iyo Warshadda, Quotes qeybiyeyaasha | Sichi
PCB Clone - Shiinaha -saareyaasha, Warshadda, Alaab -qeybiyeyaasha
Shirkaddayadu waxay diiradda saartay istaraatiijiyadda astaanta. Qanacsanaanta macmiisha ayaa ah xayaysiiskayaga ugu fiican. Waxaan sidoo kale bixinnaa adeegga OEM ee PCB Clone,Naqshadaynta PCB Iyo Been Abuurka, Dib -u -celinta MCU, Weerarkii IC,Layout PCB Master fiicni. Sida khabiir ku takhasusay arimahan, waxaa naga go'an inaan xallino dhibaato kasta ee ilaalinta heerkulka sare ee isticmaalayaasha. Badeecadu waxay gaarsiin doontaa adduunka oo dhan, sida Yurub, Ameerika, Australia, Moscow, Stuttgart, Latvia, Seattle. Badeecaduhu waxay leeyihiin sumcad wanaagsan oo leh qiimo tartan, abuuris gaar ah, oo horseedaysa isbeddellada warshadaha. Shirkaddu waxay ku adkaysanaysaa mabda'a fikradda guulaysiga, waxay samaysay shabakadda iibka caalamiga ah iyo shabakadda adeegga iibka kadib.
Aqoon -isweydaarsiga DIY: Dhis lugtaada Klone
Waa maxay sababta aanad iskugu dayin inaad dhisto dhalo halyeeyga Klon Centaur oo leh ... Waxaad ka iibsan kartaa guddiga wareegga daabacan iyo xayndaabka, ama PCB -ga si buuxda ...
20 fikradood oo ku saabsan "Injineerka Dib -u -noqoshada PCB -yada leh SprintLayout"
Dib -u -celiyeyaasha PCB -yada leh SprintLayout ... 6.0 kaas oo kuu oggolaanaya inaad soo dejiso sawirrada oo aad u adeegsato hage dib -u -abuuridda qaab -dhismeedka PCB.
STM32 Clones: Wanaagsan, Xun iyo Foolxun
Sawir -gacmeedkani asal ahaan wuxuu u shaqeeyaa sida heshiiska dhabta ah, wuxuuna socodsiin karaa Blinky oo loo diyaariyey STM32F103 si fiican. Qaar ka mid ah MCU -yadaan ayaa xitaa laga yaabaa ...
Unbericking A SEGGER J-Link V9 Debug Probe
Qaabka Tag-Connect-ka JTAG madaxa PCB-ga wuxuu umuuqday joogsi labaad oo wanaagsan, oo u baahan kaliya xoogaa shaqo ah si dib loogu noqdo injineerka saxda ah ...
49 fikradood oo ku saabsan "Samaynta PCB -yada Habka Fudud"
Nuqul. PCB -ga lagu dhisayo guriga waa laga murugsan yahay. Haddii aad tahay ... Haddii aad jeclaan lahayd in aad qaadato dhaqammo ka sii badan oo ku saabsan wax -qodista PCB, tijaabi tusaheena [Adil Malik].
Gasho TV Analog ah TV Geek ah
Wareegga gudaha wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood: guddiga wareegga daabacan ee ugu weyn oo laga dhisay hareeraha dhexda AN5151 chip, iyo PCB labaad ...
Fiidiyowga La Xiriira Clone PCB From Youtube
Jean Ascher 2021.03.03 04:19:00
Wax-soo-saarka wax-soo-saarka sare iyo tayada wax-soo-saarka wanaagsan, gaarsiinta degdegga ah iyo dhammaystirka ilaalinta iibinta kadib, xulasho sax ah, doorashada ugu fiican.
Sabrina 2020.10.26 12:04:15
Kani waa iibiye aad u xirfad badan, waxaan had iyo jeer u imaannaa shirkadooda soo iibsi, tayo wanaagsan oo raqiis ah.
Nydia 2020.05.24 02:29:44
Marina 2020.05.10 00:53:53
Paula 2019.12.19 15:53:46
Tayada badeecadu aad bay u wanaagsan tahay, gaar ahaan faahfaahinta, waxaa la arki karaa in shirkaddu si firfircoon uga shaqayso si ay u qanciso xiisaha macmiilka, alaab -qeybiye wanaagsan.
Erin 2019.12.14 12:38:57
Sawirka Layout PCB
Buck Converter Layout PCB
Ic Shirkadda Injineerka Dib -u -noqoshada
Dib -u -celiye Injineer Guddiga Cicuit
Golaha Guddiga PCB